Iraq: ISis oo soo bandhigay cajalad muuqaal ah oo ah dilka muwaadin British ah Alan Henning – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 3 October 2014 4 October 2014
Cajalad muuqaal ah oo uu ururka IS soo bandhigay ayaa laga daawaday iyadoo mid kamid ah ciidamada IS uu dilayo Alan Henning oo ay kooxda IS afduub u haysatay.
Henning ayaa ahaa darawal u shaqeynayay mid ka mid ah hay’adaha gargaarka ee dalka Siiriya kahor inta aysan ururka IS afduuban bishii December ee sanadkii hore. Ururka IS ayaa hore ugu hanjabtay inay dileyso 47-jirkan bishii hore xilli ay sidan oo kale qoorta ugaga jartay David Haines. Wasaarada arrimaha dibada dowlada UK ayaa sheegtay in ay baaritaan ku samayn doonto cajalada la soo bandhigay iyadoo intaa raacisay in haddii ay dhab tahay ay noqonayso dil kale oo yaxyax leh.
Ra’iisal wasaaraha Britain David Cameron ayaa sheegay in dilka foosha xun ee lagula kacay Alan Henning uu yahay mid tusayso sida ururka argagaxisada ah uu u yahay mid jaahilnimo ah. “Waxaan samayn doonaa wax walba oo aan awoodno sidii aan dadka dilkaa ka dambeeyay aan u keeni lahayn caddaalada.”ayuu sii raaciyay.
Ururka IS ayaa hore u soo saaray cajalado muuqaal ah oo ah dilkii labo saxafi oo Maraykan ah James Foley iyo Steven Sotloff iyo nin u shaqeynayay hay’adaha gargaarka oo u dhashay dalka UK. Dilka muwaadinkan Britishka kadib ayuu ninkii mindida watay ee ku caanbaxay qoorgoynta ururka IS waxa uu soo bandhigay nin kale oo afduub loo haysto kaasoo ah muwaadin Maraykan ah magaciisana lagu sheegay Peter Kassig.
Waxana ninkan lagu naaneyso Jihadi John kuna hadla luqad English dhalad ah waxa uu sheegay in duqeynta ay ciidamada Maraykanka ku hayaan dhulka Sham(Syria) awgeed loo qoorgoyn doono ninkan Maraykanka ah.
Sawirro: Deegaanada ciidamada Puntland kala wareegeen Alshabaab